Sida loo rakibo macOS Sierra on a Mac aan la taageerin | Waxaan ka socdaa mac
Paul Aparicio | | macOS Sierra, Tababarada
Apple ayaa la siidaayay macOS Sierra Dhamaadkii bishii la soo dhaafay, nooca cusub ee nidaamka hawlgalka desktop-ka ee la yimaada warar xiiso leh, sida Siri ama suurtogalnimada in laga sameeyo Sawir-Muuqaal Muuqaal ah oo laga daawado YouTube-ka daaqad sabaynaysa. Dhibaatadu waxay tahay, sidii caadiga ahayd, Tim Cook iyo shirkaddu waxay kaliya u oggolaanayaan nooc cusub in lagu rakibo kombuyuutarrada ay ku kalsoon yihiin inay si fiican u shaqeyn doonaan, sidaa darteed Macs badan ayaa laga tagay, taas oo, aragti ahaan, aysan ahayn inay soo bandhigaan dhibaatooyin waaweyn .
Kawaran hadaan rabno ka rakibo Sierra a Mac lama taageerin? Hagaag, ma awoodno ... ama rasmi ahaan. Xaqiiqdii, haddii ay jiraan Hackintosh, sidee aadan ugu rakibi karin macOS kombiyuutarka Apple? Hadday suurta gal tahay. Maqaalkan waxaan ku bari doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato, oo ay ku jiraan dhibaatooyinka laga yaabo inaan la kulanno xilligan iyo mustaqbalka.
1 Ku rakib macOS Sierra on Macs aan la taageerin
1.2 Waxyaabaha maskaxda lagu hayo
2 Oo sidee baan ugu cusbooneysiiyaa macOS Sierra on my Mac aan la taageerin?
Ku rakib macOS Sierra on Macs aan la taageerin
Nuqul ka mid ah rakibayaasha macOS Sierra. In kasta oo laga heli karo khadka tooska ah, waxaa ugu fiican in lagu helo adigoo ka soo degsanaya Mac taageersan.
Ugu yaraan 8GB USB flash drive ah.
Qalabka macOS Sierra Patch Tool, ayaa laga heli karaa Halkan.
Qalabka AUSEnabler, ayaa laga heli karaa Halkan.
Waxyaabaha maskaxda lagu hayo
Waa inaan maskaxda ku haynaa in waxa aan ku rakibeyno Mac aan la taageerin ay tahay nooc ka mid ah Hackintosh, taasi waa in la yiraahdo, ku rakib Mac kombiyuutar meesha aynaan awoodin inaan ku rakibno, xitaa haddii uu yahay Mac. Tani macnaheedu waa inaan la kulanno dhibaato sida kuwa soo socda:
Waxaa jiri kara Arimaha Wi-Fi. Mac-yada leh qaybta 'Broadcom BCM4321 Wi-Fi' kumbuyuutarka lama shaqeyn doono macOS Sierra illaa laga beddelayo kaarka Wi-Fi. Kombiyuutarada ay dhibaatadani saameyneyso qaar MacPro3,1; MacBook5,2; MacBookPro4,1; iMac8,1; Macmini3,1 iyo MacBookAir2,1.
El MacBook5,2 trackpad lama taageerayo. Way shaqeysaa, laakiin waxay u ogaataa inay tahay jiir iyo dejimaha qaar ee Trackpad lama heli karo.
El Maqalka iMac 8,1 wuxuu leeyahay dhibaato taas oo muggu aanu isbeddelaynin xitaa haddii uu tilmaamayo inuu isbeddelayo. Maqalku wuu shaqeeyaa, laakiin had iyo jeer tagaa ugu badnaan. Xalku wuxuu noqon lahaa in la dhigo qaar ku hadla oo ku xiran wax soo saarka taleefanka iyo xakameynta mugga iyaga.
Horaan u ognahay taas ma awoodi doonno inaan ka cusbooneysiino Mac App Store. Bishii Sebtembar waxaan tixgelinnay laba fursadood: 1) cusbooneysiinta ayaa lagu rakibay iyada oo aan la soo bandhigin dhibaatooyin; 2) cusboonaysiinta ma muuqdaan iyo / ama lama rakibay; Si tan loo xaliyo, waa inaan isticmaalnaa AUSEnabler.
Si aan fikrad kuu siiyo, waxaan ku rakibay iMac bilowgii 2009 dhibaatada kaliya ee aan ilaa hadda la kulmayna waa in mararka qaar (inyar) ay tahay inaan ku xiro Wi-Fi gacanta markaan bilaabayo ama ka soo toosayo nasashada. Marka laga hadlayo cusbooneysiinta, iTunes ayaa i cusbooneysiisay, sidaa darteed horay ayaan u ogaanay taas Barnaamijka Apple waa la cusbooneysiin doonaa dhib la’aan.
Nidaamku waa mid aad u fudud. Kaliya waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la raaco talaabooyinkan:
Waxaan USB-ga ku dhejineynaa Mac-ga halkaas oo aan ka abuureyno Bootable USB.
Waxaan fureynaa Disk Utility.
Waxaan doorannaa xididka USB-ga, guji "Delete" oo waxaan u doorannaa wax walba sida shaashada soo socota (waxaan ku dhejin karnaa magaca aan rabno):
magaca: wax alla wixii aan dooneyno.
Foomka: Mac OS X Plus (Socdaal).
Qorshe: Khariidadda qaybta GUID.
Si aan u qaabeyno, waxaan gujineynaa «Delete».
Iyadoo USB horey loo abuuray, waxaan fureynaa macOS Sierra Patcher.
Waxaan gujineynaa "Guji astaanta si aad u ..." oo aad doorato rakibaadda macOS Sierra.
"Volume" waxaan ku dooranaynaa USB drive-ka.
Waxaan gujineynaa "Howlgalka Bilow ..." oo aan sugno inta uu dhammeynayo.
Iyadoo USB horey loo abuuray, hadda waa inaan ka bilowno. Si tan loo sameeyo, waxaan dib u bilaabi doonnaa oo aan haynaa furaha ALT oo la riixay illaa aan ka aragno unugyada la heli karo.
Laga soo bilaabo darawalada aan aragno, waxaan dooranaynaa USB Bootable-ka oo yeelan doona magaca "OS X Base System".
Rakibaadda ayaa la mid ah kuwa kale: haddii aan rabno inaan rakibno 0, tag tabta "Utilities", dooro Disk Utility oo masixi wadista oo idil Kadib waxaan bilaabaynaa rakibaadda macOS Sierra oo waxaan sugeynaa howsha inay dhammaato.
Marka la rakibo, si toos ah ayuu dib ugu bilaabi doonaa. Halkan waxaan ku la kulmi doonnaa dhibaato, taasna waa inaysan awoodi doonin inay bilawdo nidaamka qalliinka. Waqtigaas waa inaan ku deminnaa Mac-ga badhanka dansan.
Waxaan mar labaad dareynaa kumbuyuutarka oo markale ayaan ku riixnaa furaha ALT si aan uga bilowno USB-ga.
Hadda waxaan aadeynaa Utiliyadaha oo waxaan dooranaynaa "macOS Post Install".
Halkan waxaan ku arki doonnaa inaan haysanno liiska hoos-u-dhaca. Dusheeda waxaan haynaa kumbuyuutar ay ogaatay. Waxaan soo bandhigeynaa liiska oo waxaan doorannaa isla nooca Mac ee aan kor ku aragno, kiiskeyga iMac9,1.
Halkaan waxaa lagugula talinayaa inaad ka tagto waxa asal ahaan la hubiyay, laakiin waxaan sidoo kale dooran karnaa inaan dhejino qaybta soo kabashada (kuma talinayo aniga maxaa yeelay aniga ima shaqeynayo), dareeraha iftiinka jawiga iyo adabtarada Ethernet. Haddii aadan midkoodna haysan, waxaan ka tagi doonaa oo keliya sanduuqyada koowaad iyo saddexaad ee la hubiyey.
Marka xigta, waxaan dooranaynaa mugga meesha dhejiska lagu dhejin doono. Muggu waa darawal adag oo aan ku rakibnay macOS Sierra.
Ugu dambeyntii, waxaan gujineynaa "Patch" oo sug.
Markaad dib u bilowdo, waxaan kaliya u baahan nahay inaan raacno talaabooyinka si aan u qaabeyno rakibaadda cusub.
Haddii aad doorbideyso, waxaad arki kartaa sida loo rakibo macOS Sierra on Mac aan la taageerin fiidiyaha soo socda.
Oo sidee baan ugu cusbooneysiiyaa macOS Sierra on my Mac aan la taageerin?
Hagaag, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad ogaato ayaa ah inaadan awoodin inaad kahesho mooyee sawirka nooc casri ah oo aad geedi socodka oo dhan ka fuliso xoq, taas oo meesha ka saari doonta xogta oo dhan, ama aad isticmaasho nooca loo soo gelin doono server-ka saddexaad. Haddii aad rabto inaad isticmaasho tan labaad ee xulashooyinkii hore, kaliya waa inaad ku dartaa dhowr tallaabo geeddi-socodkii hore:
Waxaan fureynaa AUSEnabler.
Waxaan gujineynaa «Switch Catalogs». Tani waxay ka dhigeysaa inaysan sii raadin doonin cusbooneysiinta server-yada Apple, haddii aysan ahayn mid aan rasmi ahayn. Hadaad horay usocoto, mid waliba masuul buu kayahay ficilkiisa.
Anaguna waanu haysan lahayn. Ugu dambayn, waxaan gujineynaa “OK”. Hadda waa inaan sugno nooca cusub ee loo soo gelinayo server-yada, kaasoo qaadan kara saacado yar ama dhowr maalmood.
Miyaad ku guuleysatay inaad ku rakibto macOS Sierra on Mac aan la taageerin?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo rakibo macOS Sierra on Mac aan la taageerin
iyo ka soo horjeedka?, Ku rakib Mac OS X Mavercisk MacBook Pro Retina 2015?
Juan Carlos L. dijo
Ma awoodin inaan culeyska ku bilaabo tufaax ka dib qalad ayuu i siiyaa hadaad i caawin karto waxaan isku dayaa macbook 2007 Thanks
Jawaab Juan Carlos L
Laakiin tani waa sharci?, Maxaa yeelay taas waxaad u rakibtay OS bilaash ah waxaadna joojineysaa dhibaatada noloshaada sababtoo ah sameynta tan sharciga ah uma maleynayo inay tahay tag, waxaan leeyahay ama waxaad la joogi doontaa nooca ama Yosimite ama Capitan
Ku jawaab dwlinuxero
Ah diyaar Waxaan ku rakibaa OS bilaash ah si wax waliba sharci u yihiin ka dibna waxaan rakibaa nooca ugu dambeeya ee x-code (kaliya waxaa loo heli karaa nooca 10.12 xilligan) si loogu sameeyo barnaamijyo loogu talagalay macruufka ka dibna "OS" barakaysan ee bilaashka ah ayaan dhaliyaa shahaado ka iTunes. öoooohhh maxaan horay u dhigi waayey ...
Ku jawaab Carlos Zapata
Dwlinuxero, maxaad sameyneysaa Aad sharci ugu ah nolosha, had iyo jeer waxaa jira nirig u maleynaya inuu ka qurux badan yahay kuwa kale ka dibna waxaa soo ifbaxaya inuu yahay jinni dhameystiran, ka qeyb galka kulankaan waxaad durba raadineysaa inaad ka boodo sharciyada kombiyuutarka, ma garanayo waxa halkaan ayaad ku socotaa, ku sii raac hawadaaga kaneecada dhimatay ... inaad hubaal tahay inaad tahay qof foorara ... kuuma kaa jiidi doono midka sharciga ah kan
Jawaab ku sii Yiye
Waxaan qabaa su'aal, si aan u arko haddii aad caddeyn karto.
Waxaan rakibay noocii ugu horreeyay ee Sierra xilliga dayrta markii doorashadan ay ka soo baxday MBP-gayga horraantii 2009. Waxaa jiray dhowr nooc oo dambe, laakiin weligay kama boodin cusbooneysiinta nidaamka cusbooneysiinta. Dhowr usbuuc ka hor, waxaan ka cusbooneysiiyay 0 ilaa 10.12.4, hadda waxaan ku arkaa 10.12.5 Dukaanka ...?
Haddii aan si sax ah u fahmay boostada, waa inaanan ka boodin tan, kaliya nooca jilicsan ee iTunes iyo kuwa kale, markaa su'aashaydu waa tan soo socota:
Miyaan "ka kicin karaa" Bakhaarka ama miyaan sameeyaa isla nidaamkii aan ku rakibayo 0?
Salaan iyo mahadsanid kahor.
Pablo b doqonyahow, marhore ayaan naftayda ugu jawaabey. Tan iyo markii aan arkay inaadan ku sii jirin degelkan iyo maamulayaasha websaydhku tan dheg uma dhigin
Waxaan qaatay khatarta ah inaan ka kaydiyo Bakhaarka ilaa 10.12.5 ee MBP-kayga horraantii 2009, ka dib markii aan ku rakibay nooca 0 10.12.4 oo ah habka aan la taageerin oo aan uga booday cusboonaysiinta Bakhaarka illaa .5.
Natiijadu waxay noqotay mid lagu qanco. Haddii ay dhacdo in qof uu su'aal ka keeno.
Waxaan fahansanahay in Mac Pro 2.1 (2007) aysan macquul aheyn in kor loogu qaado Sierra, maadaama ay tahay processor aan la taageerin, maadaama Sierra ay ubaahantahay Penryn. Taasi ma jirtaa? Mahadsanid.
Jawaab Javier Guinot
Waxaan hayaa MacBook (13-inji, Aluminium, Dabayaaqadii 2008)
Waxaan u gudbaa talaabada 7 ee habka rakibaadda:
«7.-Qeybaha aan aragno, waxaan dooranaynaa USB Bootable oo yeelan doona magaca" OS X Base System ".»
Waxaan siinayaa sii wad waxayna i tusaysaa astaanta NULL.
Ma ogaan karo darawalkeyga adag ama wax kale ..
Si kastaba ha noqotee waxaan dib u cusbooneysiiyay "El Capitan" labo jeer wax dhib ahna ima siinayso.
Mar alla markii aan u dalacsiiyay Sierra, wax walba way fiicnaayeen .. markii aan dib u bilaabayay ma ogaan jirin darawallada adag si kastaba ha ahaatee .. waan quusanayaa
Ku jawaab Mikersson
Waxaan xirxiraa xusuusta oo markaan ku bilaabo alt si aan uga bilaabo xusuusta ma ogaato xusuusta
Ku jawaab mauricio castro
Dadyohow, OS Patcher iima oggolaan doono inaan doorto OS Sierra! Waa maxay kordhintu waa inay lahaato?
Miguel Barreda sawir-haye dijo
Ma jiraa qof og in Sierra lagu rakibi karo MacPro 1.1 "wax laga beddelay" (taas oo ah, mid leh qalabka wax laga beddelay) oo loo beddelay 2.1?
Jawaab Miguel Barreda
Waan ka xumahay waxaan ku rakibey sariir dhaadheer anigoo raacaya talaabooyinkan iMac 9.1 (2009 horaantii - 20 ″) laakiin waxaan haystaa dhibaato ah in USB uusan shaqeynayn, ma ogi haddii qof uu iga caawin karo dhibaatadan
Ku jawaab Efren Garcia
Waa salaaman tahay, ma jirtaa waddo loogu laabto Kabtanka? Waxaan rakibay buuraleyda sare way fiicantahay laakiin markaan la kulmay dhibaatooyin wan, ma jiraa qof garanaya sida loo laabto?
Waad salaaman tahay, waxaan heystaa imac8.1 oo leh nidaamka 10.6.8
Miyaad cusbooneysiin kartaa nidaamkan dinosaur-ka mid ka sarreeya, 10.10 ugu yaraan ??
Ma jiraa qof garanaya cidda qaban karta?
Waxay sidoo kale ii sheegeen inaad u beddeli karto disk-ka gudaha qaab ka wanaagsan oo ssd ah.
Ku jawaab domayto
Sidee loo hagaajiyaa "kamaradda aan ku xirnayn" qaladka Mac
Macluumaadka ku saabsan gaadiidka dadweynaha ayaa hadda laga heli karaa Japan